Imikhuba Yokuthenga Yezinkulungwane zeminyaka ne-Omni-Channel
Ngama-smartphones ephaketheni ngalinye, ama-Millennials ahlonyisiwe futhi asejwayele indlela entsha yokuthenga. Ngamandla angaphezu kwezigidi eziyizinkulungwane ezingama- $ 200 wokuthenga waminyaka yonke, ama-Millennials ayiqembu elibalulekile ukubhekelela; kepha ngabe abathengisi bababheka kangakanani njengoba bevuselela amasu abo wokumaketha?
Ngenkathi iMillennials isakujabulela ukuthenga okusesitolo, ama-85% athanda ukusebenzisa amadivayisi wabo weselula ukucwaninga imikhiqizo ngaphambi kokuthenga. Abathengisi abakwaziyo lokhu bagcina ubukhona babo be-inthanethi buqinile futhi basebenzise ukubuyekeza ukuze kuzuze bona. Ama-50% we-Millennials azovakashela indawo yomthengisi lapho enikezwa isaphulelo se-20%, kepha ama-72.7% wabathengisi abahlinzeki ngamakhuphoni eselula kubathengi babo. Abathengisi, abaletha ibhizinisi labo esikhathini esizayo, abaphekela iMillennials ngamasu abo, bazobona impumelelo enkulu eminyakeni ezayo. Indawo Yokuthengisa kuhlolwe abathengi nabathengisi abangaphezu kwe-1,000 Millennial, bethula abakutholile ku-infographic engezansi.
Tags: Izinkulungwane zeminyakaisiteshi se-omnitekutsengisaizindlela zokuthenga